News Collection: इमरान-मल्लिकाको रोमांसले आगो लाग्ने !
इमरान-मल्लिकाको रोमांसले आगो लाग्ने !
'मर्डर' चलचित्रमा गरमागर्म दृश्यहरू दिएर तहलका मच्चाएको इमरान हाश्मी मल्लिका शेरावतको जोडीले फेरी एक पटक यस चलचित्रको दोस्रो भागमा खेल्ने भएका छन्। मोहित सूरीले बनाउन लागेको यस चलचित्रका बिषयमा छलफछ गर्न आजकल मल्लिका सधै मोहित सूरीको कार्यालयमा पुग्ने गर्दछिन्।
मल्लिका न्यूयोर्कबाट फर्केदेखी उनले यस चलचित्रमा खेल्नका लागि प्रयाशरत थिर्इन। उनलार्इ 'मर्डर' मा कमाएको ख्याती फेरी एक पटक यस चलचित्रको माध्यमबाट फिर्ता हुने आशामा रहेकी छिन्।
खबरका अनुसार यस चलचित्रमा उनका साथ बलिउडका चुम्मन बिशेषज्ञ इमरान हाश्मीलार्इ नायकको रूपमा प्रस्तावित गरेको थियो। बलिउडका दुर्इ उत्तेजक नायक नायिकाको जोडी रहने यस चलचित्रले दर्शकहरूलार्इ निकै आकर्षित गर्ने चलचित्र समिक्षकहरूको राय रहेको छ।